Shiinaha Shiinaha Warshad iftiin raaxo leh muraayad casri ah oo loogu talagalay qurxinta guriga OEM iyo Warshadda | SHUNDA
Farshaxanka iyo Farshaxanka
Nalalka / Nalalka
Siraaj Saqafka ah
2021 Hotelka Nalka Cusub ee Crystal Crystal Hot House Romantic ...
100% Dhamaan Copper Chandelier Jade Decorative Living Ro ...
Darbiga Fardooleyda Dayax Dariiqa leh oo leh muraayad bac alwaax ...
Dhunkashada cusbaynta kalluunka dahabiga ah ama macdanta naxaasta ah ...
Carsaanyo yar oo bahal bocor ah oo yaab leh ayaa habeenkii n ...
Qaab cusub oo kubbadaha ratta ku shaqeeya ee qoraxda ku qurxiya ...
Muraayad Lunar Moon muraayad waji for derbiga guriga sudhan ...
Qiimaha ugu Wanaagsan ee Biyo-Bixiyaha Sare ee Loo Sameeyay ...
Shiinaha warshad nalalka raaxada chandel casri cas ...
Darbi Dhibic alwaax ah oo Kulul shelf shelf alwaax ...
Shiinaha Warshad iftiin raaxo leh oo casri ah oo loogu talagalay qurxinta guriga
* Kusoo dhawow habeyn kasta / nal *
Ammaan iyo Raaxo leh Isticmaalka
Loogu talagalay casriga, qarniyadii dhexe, dalka, guryaha beeraha, warshadaha iyo qaababka kale ee qurxinta. Isla mar ahaantaana way fududahay in la nadiifiyo, u adkaysata gabowga, waxayna kuu adeegi doontaa sanado badan.
Rakibaadda iyo adeegga deg degga ah:Dhalada meeriskan ayaa u baahan inuu ku rakibo iibsadaha. Kaliya waxay qaadataa daqiiqado si aad u iftiimiso qolkaaga!
Qalabkan iftiinka warshaduhu wuxuu ku habboon yahay noocyo kala duwan oo qaababka qurxinta nalalka guryaha ah, sida: nalalka saqafka sare, nalalka saqafka sare, Nalalka saqafka jikada, Nalalka saqafka guryaha lagu iibiyo, Nalalka saqafka qolka cuntada, Nalalka saqafka dushiisa, iyo wixii la mid ah.
QURXINTA GURIGA SHUNDA waxaa ka go'an inay u fidiso macaamiisheenna qiimaha badan tayo sare, qiimo jaban oo nalal fiican si ay u iftiimiyaan guryahooda. Waxaan leenahay qaabab kala duwan oo nalalka ah, waxaan aaminsanahay inaad ka dooran doonto SHUNDA LIGHTING alaabooyinka ka tirsan qaabkaaga qurxinta. Hadafkeenu waa inaan siino khibrad dhab ah oo iftiin leh macaamiil kasta.
Waxyaabaha Crystal, Birta
Xirxirida Dhex-dhexaad ama habeyn baako
Waqtiga dirida Qiyaastii 7 maalmood oo shaqo kadib helitaanka deebaajiga
Rarida Hawada, Badda, iyo Express (DHL, TNT, UPS, EMS, Fed Ex)
Aqoon isweydaarsi & Khadka Wax Soo Saarka
1. OEM & ODM, Qalab kasta oo Laydhka lagu hagaajin karo qaab, midab, cabir, iwm.
2. Baadhitaankaaga lagu xaqiijiyey alaabooyinkayaga ama qiimaheena waxaa laguugu jawaabi doonaa 1 saacadood gudahood
3. Tayada ugu fiican, qiimaha tartanka iyo gaarsiinta waqtiga.
Warshada Qurxinta Guriga ee Shunda waa shirkad bixisa laydh xirfadlayaal ah oo bixisa wax soo saar, naqshadeyn, iibin iyo adeeg kadib iibka macaamiisha adduunka. Shirkadeena waxay diirada saareysaa wax soo saarka iyo nashqadeynta dhamaan noocyada wax soo saarka Laydhka sida nalka suunka, nalka gidaarka, laambada saqafka, laambada miiska, laambada dhulka iwm oo si weyn loogu adeegsado dhismayaasha xafiiska, suuqyada laga dukaameysto, dukaamada waaweyn, iskuulada, mashruuca huteelada, sidoo kale waxaan bixinaa Adeegyada ganacsiga ee OEM iyo ODM.
Tayo sare, badeecado qiimo tartan leh iyo adeegga ugu fiican ayaa ah raacdadeena aan kala go’a lahayn. Khibrad u yeelo soo-saarka nalalka iyo dhoofinta waxay aaminsan yihiin inay ku siin karaan khibrad wada-shaqeyn wanaagsan. Iyada oo iftiin dhalaalaya, hufnaan cusub, qaabab kala duwan iyo adeegyo feker leh, alaabteenu waxay ku guuleysteen kalsoonida iyo kalsoonida macaamiisheenna, U fiirso fariintaada oo ku soo dhawow warshaddeena
Hore: Shiinaha Crystal Chandelier Light Rikoor raaxo leh Crystal Hanging Lampara Luminaires Drop Lustres for Restaurant Living Room
Xiga: Qolka fadhiga Nordic chandelier jawiga raaxada hurdada makhaayada sixirka bean galaaska xiddigta iftiinka hal abuurka hal abuur leh
Gidaarka Fudud ee Fudud
100% Dhamaan Copper Chandelier Jade Qurxinta Livi ...
Qaab cusub oo kubbadaha ratta ku shaqeeya ee cadceedda ku shaqeeya ay qurxiyaan n ...
Qalab casri ah oo si toos ah u sameeya miiska ...
Qiimaha ugu Fiican Raaxo Biyo Biyo Leh Oo Dul Watay C ...
2021 Waxyaabaha Cusub ee Cusub ee 3D laalaada Dayaxa ...
Muraayad casri ah oo muraayad miiska sariirta dhinaceeda ...
Weydiimaha ku saabsan alaabtayada, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga / whatsapp-ka waxaanan la xiriiri doonnaa 12 saacadood gudahood.
Darbi-jiifkii Dayax Darbiga oo Muraayad Woode ah ...
2021 Waxyaabaha Cusub ee Daahsoon 3D Dayax Daldala ...
Wax soo saarka cusub ee marawaxadaha Kulleelaya Wine Pot an ...
muraayada dhalada dhabta ah, laambadaha iyo shelf for ho ...
Alaabada qurxinta guryaha ee Shunda
Cinwaanka: Magaalada Henglan, Magaalada Zhongshan, Gobolka Guangdong, Shiinaha